CARMO: Madaxweynaha Puntland oo Degmada Carmo ku booqday Halgamaa Ladane Saalax Deer(Sawiro).
November 29, 2012 5:31 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Carmo: (pp)- Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud ayaa Duleedka Magaalada Carmo ku booqday oday wayeel ah oo ka mid ahaa ragii usoo dagaalmay xoriyada ay maanta harsanayso Soomaliya, Halgaamagan oo kamid ahaa Dhalinyaradii Xoriyad doonka ahayd ee SYL oo lagu Magacaabo Ladane Saalax Deer ayaa iminka ku nool Guri weyn oo ku yaala banaanka hore ee degmada Carmo.
Madaxweynaha oo booqday Ladane Salaax Deer ayaa ka waraystay xaaladiisa caafimaad, Isagoo la yeeshay kulan gaar ah, wuxuuna Madaxweynuhu mudo lalahaa kulan gaar ah odaygan Halgaamaga ah, Madaxweynaha ayaa uga warbixiyey Ladane xaalada ay ku sugan tahay Puntland xilligan iyo Halka uu maraayo dib u yagleelida qaranimadii Soomaaliya.
Halgamaa Ladane Faarax Deer ayaa isaguna si aada ugu farxay booqashada Madaxweynaha Isagoo uga Mahadceliyey booqashada uu ugu yimi wuxuuna Madaxweynaha uga waramay sida ay tahay xilligan xaaladiisa Caafimmad iyo tiisa nololeedba.
Dhalinyaradii SYL ee usoo dagaalantay Xoriyadii Soomaaliya ayaa iminka waxaa ka nool tiro yar oo aan Soomalida ka helin xaquuqdii ay ka mudnaayeen, Maadama aya dhiigooda usoo daadiyeen xoriyada ay maantay Soomali badan harsanayso waalow aan la oran karin Soomalidu sidii ugu wanaagsanayd ayey uga faaidaysteen xoriyadii ay qaateen Marka loo eego halka uu maanta xaalka dalku maraayo.
Mukhraar Cabdi Faarax
Puntlandpost, Carmo, PL